Ihe ị ga-ahụ na Tangier | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Tangier
N'ịbụ nke dị na mgbago ugwu nke mba ahụ, Tangier bụ obodo na-ekwo ekwo na mgbe akụkọ ihe mere eme ya ka ndị dị iche iche bi (ndị Carthaginians, ndị Rom, ndị Finishia, ndị Arab ...) ndị hapụrụ akara ha na ya N'ihi ngwakọta nke ọdịbendị a, Tangier taa nwere agwa mara mma na ọdịbendị nke sitere na mmụọ nsọ ma na-akpali ndị ọgbọ.
Na mgbakwunye, ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke abụọ nke Morocco mgbe Casablanca na obodo dị mkpa maka njem nleta maka Morocco ekele maka osimiri ya, ala ya na ọdịbendị ọdịnala ya na-atọ ụtọ.
Ọnọdụ ya, akụkọ ihe mere eme ya na ọtụtụ ebe obibi ya na-eme Tangier bụ ebe a na-achọsi ike maka ndị njem na-achọ njem na ncheta a na-agaghị echefu echefu.
2 Mgbidi nke Tangier
4 Ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị
Site na obere Souk ị nwere ike ịnweta Alcazaba, mpaghara elu nke Medina nke, gbara ya gburugburu, nwere echiche dị ebube banyere ọdụ ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri Tangier. N'ụbọchị doro anya, ị nwere ike ịhụ Nkume Nkume nke Gibraltar.
Ije ije n'okporo ámá ya gbara agba ị ga-enwe ọnọdụ dị jụụ nke Alcazaba na ị ga-etinye akụkọ ihe mere eme nke obodo Africa a. Nke a bụ Dar el Markhzen, bụ obí gọvanọ nke gara aga kemgbe narị afọ nke XNUMX. Taa, ọ bụ ebe obibi nke Museum of Moroccan Arts ebe ụlọ mgbakwunye dị na ya, Dar Shorfa, bụ ebe obibi maka ihe mgbe ochie, nke gosipụtara ọrụ aka na ihe akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ site na Bronze Age ruo narị afọ nke XNUMX.
Ebe ọzọ ị ga-eleta na Tangier Alcazaba bụ ụlọ alakụba Bit El-Mal na minaret ya nwere akụkụ asatọ, ụlọ ikpe ochie Dar esh-Shera na square nke Kasbah. Na nso ebe ị nwere ike ịga na ili Ibn Jaldun na Ibn Batouta, mmadụ abụọ ndị Moroccan mere eme nwere nnukwu mmasị.
Mgbidi nke Tangier
Mgbidi nke Tangier bụ ihe ncheta ndị ọzọ na-adọrọ mmasị ileta n’obodo ahụ. Ọ bụ okpukpu okpukpu anọ nke nwere ụlọ elu, ụlọ nche na ụzọ iji chebe ya.
N'ihi ọnọdụ dị mma nke Tangier n'ihu Strait nke Gibraltar na n'ebe ugwu nke mba ahụ, mgbidi ahụ kwere ịchịkwa ebe ahụ ma mee ka Medina na Alcazaba dị mma., ebe ike ọchịchị dị.
Mgbidi nke Tangier nwere ọnụ ụzọ ámá iri na atọ ma nwee batrị nchekwa asaa. N'ebe ugwu ị ga-ahụ Bab Haha na Bab al - Assa nke jikọtara Alcazaba na Medina ebe n'akụkụ ndịda bụ Bab Fahs, nke jikọtara Medina na ndị ọzọ Tangier.
Gagharịa n'okporo ámá Marina ahụ dị ndụ nke na-eduga n'ọdụ ụgbọ mmiri ma pụọ ​​na Bab el Bahr nke na-eduga n'oké mmiri ahụ na mgbidi ya, Borj el Mosra na Borj el Hadioui. Kporie echiche mara mma nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ site na ịga n'isi ugwu na nso Borj el-Baroud.
Medina nke Tangier na-echekwa ọmarịcha Arab ya na mpaghara ụfọdụ nke mgbidi ya nwere ụlọ elu Portuguese n'agbanyeghị ọnọdụ ụlọ ụkpụrụ ụlọ Europe na-emetụta ya na narị afọ ndị a.
N'ime Medina, enwere ike ịkọwapụta ebe abụọ dị mkpa: Zoco Grande (nke a makwaara dị ka Plaza 9 de abril, ebe a na-ahụbu ahịa ime obodo) na Zoco Chico (obere oghere nke ụlọ kọfị na ụlọ mbikọ gburugburu ebe ndị ọgụgụ isi).
N'ime Souk Grande, nke emezigharị n'oge na-adịbeghị anya, anyị na-ahụ ụlọ alakụba Sidi Bu Abid (1917) nke nwere minaret seramiiki, yana Obí nke Mendub na Medubia, bụ ndị ubi ha bụ osisi dragon ochie afọ na nke fọdụrụ nke ọtụtụ narị afọ- ochie cannons. XVII na XVIII. N’ihu ya ka ọnụ ụzọ ámá Bab Fahs dị, ebe Medina bidoro.
El Zoco Chico bụ square gbara gburugburu na cafes emi odude ke utịt Siagin Street. N'ebe a, anyị nwere ike ịchọta ụlọ ụka Katọlik ochie nke La Purísima, nke bụ ugbua ebe etiti mmekọrịta nke ụmụ nwanyị nke Charity of Calcutta.
Na-esote ya bụ ebe obibi mbụ nke onye nnọchi anya Sultan Mendub na Tangier n'oge narị afọ XNUMX a na-akpọ Dar Niaba. N'isochi njegharị nke obere Souk, anyị rutere n'okporo ámá Mouahidines, nke bụ isi mpaghara ọrụ aka na obodo. N’akụkụ okporo ámá a, anyị na-ahụ Nnukwu Alakụba, nke n’oge Portuguese, bụ katidral a raara nye Mmụọ Nsọ.
Na Medina, ọ bara uru ịga na ebe ndị bazaa na n'okporo ụzọ Francis, Mouahidines na Siaguin, ebe ị ga-ahụ ebe nchekwa kachasị mma nke njem gị na Tangier.
Na agbata obi Beni Idder, nke dị na ndịda Medina, anyị nwere ike ịchọta ahlọ Nzukọ Nahón dị na Cheikh Street, nke gbanwere ugbu a na ebe ngosi nka na otu n'ime ụlọ nzukọ kachasị mma n'ụwa. N'ụlọ nzukọ ọzọ dị n'ógbè ahụ bụ Lorin Foundation Museum nwere ọtụtụ ụlọ ngosi.
Nleta na Port nke Tangier ka akwadoro iji hụ ndị mmadụ nọ n'oké osimiri na-arụ ọrụ na azụmaahịa ha n'ihi ọrụ a na-emekarị.
Boulevard Mohamed VI dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri. Ije ije n'oké osimiri na ụlọ ndị merela agadi na-echetara, n'ụzọ ụfọdụ, obodo ndị Portuguese.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Ihe ị ga-ahụ na Tangier